မင်းအောင်သက်လွင် - ဘ၀ခရီးလမ်းကြမ်းမှ စာမူကြမ်းများ။ မီနီမဂ္ဂဇင်း
ကာတွန်း၊ ကဗျာ၊ ဓမ္မဟာသ၊ သက်သေခံချက်၊ ဆောင်းပါး၊ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်၊ ဘာသာပြန်
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း
Read more: ဘ၀ခရီးလမ်းကြမ်းမှ စာမူကြမ်းများ။ မီနီမဂ္ဂဇင်း...
SEMINAR WORKSHOP - SINGAPORE (JBCS)
1.3.2008 – 5.3.2008 မဿဲ ၁၃၊ မျိုးစေ့ကြဲမှု၊ ၀ှက်ထားဘဏ္ဍာ၊ မြက်သောပုလဲ..
Sponsored by Rev. Dr Kyaw Win (Ph.D, President of CIST)
၁။ မင်္ဂလာ ကိုးပါး
မဿဲ ၅း၁-၁၂
၂။ အောင်မြင်ခြင်းရရှိရန် အသက်တာ၏ အုတ်မြစ် သင်ခန်းစာ (၁)
မဿဲ - ၇း၂၄-၂၇၊ လု - ၆း၄၇-၄၉
၃။ ယုံကြည်သူများအာ တိုက်ခိုက်နေသည့် စာတန်၏
(က) မျိုးစေ့ကြဲခြင်း၊ မဿဲ-၁၃း၁-၂၃ သင်ခန်းစာ (၂)
(ခ) ကောင်းသောမျိုးစေ့ နှင့် တောမျိုးစေ့၊ သင်ခန်းစာ (၃)
မဿဲ ၁၃း၂၄-၃ဝ ၊ ၃၆-၄၃
(ဂ) မုန်ညှင်းစေ့နှင့် ငှက်၊ မဿဲ-၁၃း၃၁-၃၂ သင်ခန်းစာ(၄)
(ဃ) မုန့် ညက်နှင့် တဆေး၊ မဿဲ-၁၃း၃၃ သင်ခန်းစာ(၅)
၄။ အောင်မြင်သော ခရစ်ယာန် အသက်တာ၏
(က) လယ်၌ ဝှက်ထားသော ဘဏ္ဍာ၊ မဿဲ-၁၃း၄၄ သင်ခန်းစာ(၆)
(ခ) မြတ်သောပုလဲရှာဖွေခြင်း။ မဿဲ-၁၃း၄၅-၄၆ သင်ခန်းစာ(၇)
(ဂ) ပိုက်ကွန်ရေထဲသို့ ချခြင်း၊ မဿဲ-၁၃း၄၇-၅ဝ သင်ခန်းစာ(၈)
(ဃ) အိမ်ရှင်၊ မဿဲ-၁၃း၅၁-၅၂ သင်ခန်းစာ(၉)
Rev. Dr Kyaw Win PhD ရေးသားပြုစုသည်။
Read more: ၀ှတ်ထားသောဘဏ္ဍာ ဖေါ်ထုတ်ခြင်း
God’s Second Man
'အကြောင်းမူကား၊ တယောက်သောသူသည် နားမထောင်သောအားဖြင့်၊လူများတို့သည် အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ၊ တယောက်သော သူသည် နားထောင်သောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏' (ရော၊၅း၁၉)
Read more: ဘုရားသခင်၏ဒုတိယလူ - God’s Second Man
ဖတ်ရန်ကျမ်းပုဒ်များ ။ ဧဖက် ၁း၁၅-၂၃၊ ဧဖက် ၄း၁-၆
သော့ချက် ကျမ်းပိုဒ်။ 'ထိုအတူ အများဖြစ်သောငါတို့သည် ခရစ်တော်၌ တကိုယ်တည်းဖြစ်၍' ရော၊ ၁၂း၅။
ဘုရားသခင်သည် ပထမဆုံးလူ အာဒံကို မဖန်ဆင်းမီကပင် လူသားများသည် သူကိုပုန်ကန်မည်ကို သိခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၌ ကြီးမားသောအစီအစဉ်တစ်ခု ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဘာကို စီစဉ်ခဲ့ သနည်း။ လူများကို အာဒံ၏အပြစ်သားမျိုးနွယ်မှ ခေါ်ယူ၍ ဝိညာဉ်ခန္ဓာ တစ်ခုဖြစ် သော 'အသင်းတော်'၌ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းစေရန်အတွက် ဘုရားသခင် စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် အသင်းတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမြတ်သော အမှန်တရားများကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။
'အသင်းတော်'ဟူသော စကားလုံးကိုကြားပါက သင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သော အဆောက်အဦးကို သင်တွေးမိပေလိမ့်မည်။ သင်သည် ဘုရား ကျောင်း ထိပ်ဖျား အမိုးချွန်၊ တရားပလ္လင်၊ ခုံတန်းရှည်များနှင့် သံစုံသီဆိုသောနေရာပြသာဒ်ကို ပြေးမြင်ပေမည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည် အဆောက် အဦး တစ်ခု သာဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင် သူ၏ နှုတ်ကပတ်၌ ဖော်ပြထားသော 'အသင်းတော်'မဟုတ်ပါ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ဖော်ပြထားသော အသင်းတော်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ 'ခေါ်တော်မူခြင်း ခံရသောလူများ၊ လူစုလူဝေး'ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အသင်းတော် သည် လူများကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဆောက်အဦးကို ရည်ညွှန်း ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် ရွေးနှုတ်ထားသော ယုံကြည်သူများ ကို ရည်ညွန်းသည်။
Read more: ခရစ်တော်၌ တစ်ခုတည်းသော ကိုယ်ခန္ဓာ - One Body in...
ဖခင်များနေ့ အမှတ်တရ ( ဇွန်လ ၂ဝ၁၀)
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ ။ တကယ့်တကယ် ပုခက်လွှဲရတဲ့ သူတွေက ဖခင်တွေပါဗျာ။ ̏ပုခက်လွှဲ သော လက်သည် ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည် ̋ ဆိုတဲ့ စကားကို ပြန်လည် ချေပ လိုတဲ့ စကားကတော့-- ̏ပုခက်လွှဲသော လက်ပိုင်ရှင် စစ်စစ် (ဖခင်) သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တုန်လှုပ်
Read more: ဖခင်များနေ့ အမှတ်တရ ( ဇွန်လ ၂ဝ၁၀)
ဟီးရိုးဖေဖေ - ဖခင်များနေ့